स्लाईड अर्डर परिवर्तन
छनौट गर्नुहोस् दृश्य - रूपरेखा, स्लाईड चयन गर्नुहोस्, र अर्को स्थानमा स्लाईड तान्नुहोस्.
छनौट गर्नुहोस् दृश्य - साधारण वा द्रष्टव्यहरू, स्लाईड पूर्वदृश्य चयन गर्नुहोस् स्लाईडहरू फलकमा, र स्लाईड पूर्वदृश्य अरू स्थानमा तान्नुहोस्.
तपाईँको प्रस्तुतिबाट स्लाईड अस्थायी रूपमा हटाउनका लागि, जानुहोस् स्लाईड क्रमबद्वकर्ता, स्लाईडमा दायाँ-क्लिक गर्नुहोस्, र छनौट गर्नुहोस् स्लाईड देखाउनुहोस्/लुकाउनुहोस्. लुकाइएको स्लाईडको नाम ग्रे हुन्छ. स्लाईड देखाउनका लागि, स्लाईडमा दायाँ-क्लिक गर्नुहोस्, र छनौट गर्नुहोस् स्लाईड देखाउनुहोस्/लुकाउनुहोस्.
अनुकूल स्लाईड दृश्य निर्माण गर्दा
Title is: स्लाईड अर्डर परिवर्तन